Etu esi gbanyụọ Windows 10 PC anyị | Akụkọ akụrụngwa
Otu esi gbanyụọ Windows 10 PC anyị ngwa ngwa
N’oge na-adịghị anya, eziokwu bụ na-agbasokarị na laptọọpụ na-emegharịkwu ụra ma ọ bụ sistemụ ụra karịa nke mmechi ọdịnala. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ ka kpamkpam gbanyụọ ha ngwaọrụ, na ọ bụ ya mere anyị ga-agwa gị banyere ụfọdụ ụzọ na- nwee ike imechi kọmputa gị Windows 10 ọsọ ọsọ ma si otú ọkọ a ole na ole sekọnd otú ha bara uru taa. Chee echiche banyere ya, ị nwere ike ịhapụ ntakịrị tupu ọrụ ma ọ bụrụ na ị soro ndụmọdụ anyị iji gbanyụọ kọmputa gị.
Iji gbanyụọ kọmputa Windows 10, anyị ga-abanye na akara ngosi Microsoft Windos, wee pịa ike ma mesịa pịa "gbanyụọ". O siri ike ịghọta ihe kpatara Microsoft ji kpebie ịkwụsị usoro mmechi desktọọpụ otu aka. Ọ dabara nke ọma na anyị nwere ụzọ ndị ọzọ maka nke a na anyị ga-agwa gị ugbu a.
1 Tinyegharịa bọtịnụ ike
2 Tinye uzo mkpirisi
3 Na bọtịnụ nke abụọ na akara ngosi Windows
Tinyegharịa bọtịnụ ike
Press pịa bọtịnụ ike gị na ... kọmputa ahụ kwụsịtụrụ, olee ihe ọjọọ. Kedu ihe kpatara na anaghị agbanyụ, ọ bụrụ na ọ bụ bọtịnụ ike, ọ bụghị bọtịnụ ike. Ka o sina dị, ihe ngwọta ya bụ nyochagharịa bọtịnụ a. Iji mee nke a, anyị na-aga na nchọta ọchụchọ Cortana ọzọ ma pịnye "Energy" iji tinye nhọrọ ike. Ozugbo anyị ruru ebe ahụ, anyị na - ahọrọ nhọrọ “ike mkpịsị ugodi ike”, anyị na - emepe menu wedaa ma họrọ “gbanyụọ”, yabụ mgbe anyị pịrị bọtịnụ gbanyụọ, ọ ga - agbanyụ.
Tinye uzo mkpirisi
Ọ bụ obere odibo, mana ọ na-arụ ọrụ. Naanị na ịpị aka nri nke bọtịnụ anyị na-ahọrọ ebe ọ bụla na desktọọpụ iji mepee menu ndọpụta, ozugbo anyị ga-pịa «ọhụrụ> ụzọ nweta kpọmkwem», ogwe ederede ga-apụta, naanị detuo: % windir% System32 shutdown.exe / s / t 0
Na magically ụzọ mkpirisi ga-egosi na desktọọpụ nke ga-agbanyụ kọmputa ahụ mgbe anyị pịa ya ugboro abụọ. Ọ dị ntakịrị ihe ize ndụ, n'ihi na anyị nwere ike ịmehie mgbe ịpị ya, mana ọ gaghị ekwe omume ngwa ngwa.
Na bọtịnụ nke abụọ na akara ngosi Windows
Ọ bụrụ na ị pịa na nri pịa akara ngosi Microsoft Windows, menu ndọpụta ga-emepe, n'etiti ọtụtụ nhọrọ otu bụ "Mechie ma ọ bụ pụọ", ebe ahụ ka anyị nwere ike ịhọrọ n'etiti nhọrọ ike dị iche iche dị na mbụ, ọ dị nwayọ nwayọ, mana obere bụ ihe ọ bụla.
Anyị nwere olile anya na ndụmọdụ ndị a ga-enyere gị aka mechie Windows 10 ọsọ ọsọ ma bulie gị pụọ na obi abụọ dị adị,
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Otu esi gbanyụọ Windows 10 PC anyị ngwa ngwa
Ihe ngosi vidio vidio nke September 2015
Innjoo Otu, ama ohuru nke China nwere ihe okike puru iche